Global Voices teny Malagasy » Ny Fanjakazakan-Dehilahy Sy Ny Fomba Fijery Tranainy Diso No Mahatonga Ny Lasibatry Ny Fanolanana Hangina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Novambra 2013 22:32 GMT 1	 · Mpanoratra Fundacion MEPI Nandika (en) i Silvia Viñas, Naomy
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Ady & Fifandirana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
Lehilahy sy vehivavy manohitra ny herisetra ara-pananahana ao Meksika. Saripika avy amin'i Say NO – UNiTE ao amin'ny Flickr avy amin'ny fahazoan-dalana Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0)
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Daniela Guazo ho an'ny Fundación MEPI, nivoaka voalohany tamin'ny 21 febroary 2013. Mbola mitoetra ho olana goavana ao Meksika ny fanolanana sy ny herisetra hafa atao amin'ny vehivavy. Araka ny tatitra vao haingana [es] nataon'ny Fikambanana ho amin'ny Fiaraha-Miasa Ara-Toekarena sy ny Fampandrosoana (OCDE), dia ny 47% -n'ny vehivavy ao Meksika dia efa nangirifirin'ny herisetra ara-nofo sy/na ara-pananahana nandritra ny androm-piainany.
Ny fanolanana ireo mpizahatany espaniola enina  tao amin'ny tanandehiben'ny fizahantany ao Acapulco nandritra ny fotoan'ny fialan-tsasatra lava voalohany tao Meksika no namelona ny fanairana tao amin'ny sokajin'asan'ny fizahan-tany ao amin'ny firenena saingy tsy nahataitra loatra ny manampahefana momb ny tahan'ny fanafihana natao tamin'ny vehivavy – izay ahenoana fa misy vehivavy iray voaolana isaky ny efatra minitra, araka ny antotanisa navoakan'ny governemanta.
Nihanasiaka kokoa ny heloka bevava, tahaka ny herisetra ao Meksika tao anatin'izay taona faramparany izay, hoy i Laura Martinez Rodriguez, talen'ny fikambanana iray anisan'ny tranainy indrindra an'ireo lasibatry ny fanolanana fantatra amin'ny fanafohezan'anarana hoe ADIVAC ao an-tanànan'i Mexico City.
“Taloha izahay tsy nahita ary tsy nahalala fa nisy ny fandoroana na ny fampijaliam-batana. Soa izahay fa nahita ny vehivavy velona,” hoy ny nolazainy. “Ankehitriny ireny vehivavy ireny dia maty.”
Ilay tanàna amoron'ny ranomasimbe Pasifika ao Acapulco ankehitriny no heverina fa tanàndehibe faharoa manerantany ahitana taham-pamonoan'olona 142 isaky ny mponina iray hetsy, araka ny filazan'ny ONG Meksikana iray, Vaomieran'ny Olompirenena Ho amin'ny Fiarovam-Bahoaka sy ny Fitsarana Ny Mpanao heloka bevava. Ary raha heverina ho ambany kokoa noho ny an'ny fanjakana hafa ny taha, izay nahazoana tatitra trangam-panolanana 351 monja voaray ao an-drenivohi-panjakan'i Acapulco ao Guerrero, dia manafina zavamisy matroka kokoa ny tarehimarika.
Milaza ny manampahaizana manokana fa tsy milaza any amin'ny manampahefana mihitsy ny fisian-keloka ny ankamaroan'ny lasibatry ny fanolanana. Misy kolontsaim-panjakazakan'ny lehilahy mahery vaika izay manakivy ny vehivavy handroso ary maro no tsy mahalala izay toeran-kafa azo aleha. Misy fanadihadiana nataon'ny governemanta tamin'ny 2011 izay nahita fa tombanana ho ny 94 isanjaton'ny fanolanana no tsy voarakitra.
Tsindrio ny sary hitsidihana ny sarintany ifandrimbonana mampiseho ny taham-panolanana voarakitra isaky ny vehivavy iray hetsy ao Meksika.
“Mbola misy ihany ny toerana ahitana olona mieritreritra fa manao fihantsiana ny vehivavy manao zipofohy nefa tsy izany no izy. Misy ny heloka bevava izay tsy misy ifandraisany amin'ny mahaizy ilay olona,” hoy i Erika Molina Carranza, izay lehiben'ny vondrona mpanao famotorana momba ny trangam-panolanana ao an-tanànan'i Meksika.
Zavatra iray tsy mampaharisika ny vehivavy ihany koa matetika dia namana na fianakaviana ihany no manao ilay fanolanana, tahaka ny an'ilay Abundio García Guadalupe, 44 taona voampanga ho nanolana ny zana-badiny 12 taona tany akaikin'ny fanjakan'i Jalisco. Niteraka ny zanany izy tamin'ny janoary. Nilaza izy fa tsy nisy ny herisetra satria nanao ny zavatra rehetra omban'ny faneken'ny zaza sy ny vadiny izy.
Na dia mitatitra ny fisian'ny heloka aza ny vehivavy dia tsy mitozo amin'ny fiampangana. Nilaza i Molina fa ny atsasaky ny vehivavy nametraka fitoriana no tsy mitozo noho ny fombam-pitsarana lava loatra sady tsy te-hifanatrika amin'ny mpanolana aminy izy ireo. Mandany andro manontolo ny manome tatitra amin'ny polisy miaraka amin'ny niharam-boina voatery manoratra manontolo ny fitoriany (tatitra), mipetraka miaraka amin'ny mpahay sary hanoritsoritana (ny lasibatra sa nanao heloka) ary ny fihaonana amin'ny dokotera mpitsabo izay manome ny fanafody ilaina raha niharan'ny fanolanana.
“Rehefa fantatry ry zareo ny havesatry ny heolka dia tsy te-hiroso ry zareo,” hoy i Molina.
Ao Mexico City, tsikaritry ny governemanta sy ireo sampan-draharaha sivily misahana ny trangam-panolanana fa ny sakana lehibe indrindra hiatrehana ny fanolanana dia ny fomba fitsaratsarana dison'ny firenena.
Maro ny vehivavy no tsy te-hilaza amin'ny manampahefana akory satria mieritrritra ry zareo fa tsy hisy ny hino hoe naolana ry zareo na hieritreritra azy ho jiolahimbavy, ary eo ihany koa ny faneren'ny fianakaviana amin'ny lasibatra tsy hampitondra henatra ny anaram-pianakaviana. Ny hakelin'ny trangam-panolanana voarakitra (nanaovana fitoriana) dia mazava ao amin'ny biraon'ny ADIVAC izay ahitana fa amin'ny lasibatra 400 isam-bolana dia ny 10 isanjato eo ho eo no notafihan'ny vahiny (olon-tsy fantatra). Vasoka izany isa izany raha oharina amin'ny trangam-panolanana voarakitra ao an-tanàna izay manodidina ny 70 isam-bolana.
Mandrakitra trangam-panolanana 18 isaky ny mponina 100.000 isan-taona (ny tanànan’)i Mexico City, tarehimarika lazain'ny manampahaizana ho ambany lavitra amin'ny tena isany.
tsindrio ny sary hitsidihanao ny fira ifandrimbonana mampiseho ny isan'ny fanolanana voatatitra tamin'ny 2005 sy 2012.
Ny tena mampihorohoro an'i Martinez dia vao haingana izay no nahery setra kokoa sy mafy kokoa ny fanolanana.
“Nahita avokoa izahay rehetra. Indray mandeha nisy vehivavy iray niharam-boina tamin'ny enina maraina izy an-dalana hiasa. Nisintona azy avy any aoriana ny namely azy raha niampita tetezan'ny mpandeha an-tongotra izy,” hoy izy.
Saingy sombintsombiny ihany no ren'ny manampahefana. Nisy tranga iray, nanafika vehivavy nihoatra ny herintaona ilay efa zatra ny manolana iray any amin'ny faritry ny mahantra atsimon'ny tanàna nialoha ny nahasamborana azy. Nilaza i Molina fa tsy natao izany mandra-piasian'ny vehivavy telo nametraka fitoriana, izay vao nikaroka ny ahiahiana ny polisy.
Trohy ny angon-kevitra
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/11/27/54937/
 Fundación MEPI, : http://fundacionmepi.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=903:machismo-and-old-prejudices-keep-mexican-rape-victims-silent&catid=96:data&Itemid=342
 tatitra vao haingana : http://www.sinembargo.mx/06-11-2013/806119
 fanolanana ireo mpizahatany espaniola enina: http://www.theguardian.com/world/2013/feb/06/spanish-tourists-acapulco-raped-gunpoint